Maqal”Gudoomiyaha G/Nugaal oo ka jawabay Hadal uu kajeediyay Xaflad Dhigiisa G/Banaadir – SBC
Maqal”Gudoomiyaha G/Nugaal oo ka jawabay Hadal uu kajeediyay Xaflad Dhigiisa G/Banaadir
Posted by Webmaster on May 9, 2013 Comments
Gudoomiyaha Gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali ayaa Jawaab ka bixiyay Hadalo uu ka jeediyay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Xaflad ka dhacday magaalada London carunta dalkaasi Ingiriiska.
Hadalka uu jeediyay Tarsan ee jawaabta keenay ayaa ahaa tan uu ugaga hadlay Maamulo Sameystay Calamo aan jirin waa sida uu hadalka u dhigaye, waxaana taasi ku tilmaamay Arin aan lagu hadlin lagana fiirsan gudoomiyaha gobolka Nugaal.
Waxa uu taabtay gudoomiye Cabdi Xirsi Cali Taariikh kooban oo ku saabsan dhigiisa Gobolka banaadir isagoo sheegay in marar badan uu qaladaad ka galay Puntland iyo Calanka Soomaaliyeedba.
Dhinaca kale waxa uu Gudoomiyaha Nugaal ka hadlay qodobo kale oo ku saab sanaa isbedel xatooyo ah oo la sheegay in lagu sameeyay Dastuurkii lagu heshiyay ee loo sameeyay Dowlada federaalka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay gudoomiye Qarjab in Cidii qiyaanada iyo isbedelka aan sharciga aheyn ku sameysay Dastuurka kuwo galay Qiyaano qaran, umada soomaaliyeedna aysan u noqon karin kuwo ka turjuma.
Halkan ka dhageyso Hadalada iyo Jawaabta Gudoomiyaha Gobolka NugaalGudoomiyaha Gobolka Nugaal
Waxay imanayaan ka hadalka Arimaha Dastuurka iyo Jawaabta Gudoomiyaha Gobolka nugaal uu u diray dhigiisa Gobolka Banaadir xili ay soo shaac baxday qiyaano iyo wax ka bedel xatooyo ah oo lagu sameeyay Dastuurka dowlada dhexe ee Soomaaliya qodobo ka mid ah .